Siiyaasiin qaati ka daagan tuugsiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Siiyaasiin qaati ka daagan tuugsiga
La daabacay måndag 26 augusti 2013 kl 11.35
Siyaasiinta Göteborg ayaa qaati ka taagan tuugsiga magaaladas ku soo batey. Siiyaasiinta Socialdemokratiga ayaa dowladda ka dalbatey in ay lacag geliso sida dadyowga tuugsanaya loo caawin lahaa, sida uu weriyey telefishinka SVT.
- Waxaan aad uga gelgishey tirada ay gaareen tuusedeyaasha xagaagan. Hadii dhamaantood sii jogaan marka xilliga qaboobaha la gaaro wey nago adkeyneysaa in aan gacan u fidino. Waxaase la yaabkeed leh xiiso la'aanta dowladda ee arintan, ayuu yeri Dario Espiga (S) mar u waramyey SVT-Västnytt.
Sida laga soo xigtey Stadsmissionen i Göteborg boqolal ruux ayaa magaaladas ka tuugsada si ay lacag ugu diraan qaraabadooda ku sugan dalalkii ay ka yimaadeen. Inta badan dadka tuugsada ayaa ka soo jeeda dalka Rumänien, waana qoomiyada la yiraahdo Romer inkastoo aysan dhamaantod Romer aheyn.
- Waayadii hore dadkan shaqo mushaar maalmed ah ayey ka heli jireen waddankooda. Markii taa waayeeyna waxey u socdaaleen Spanien iyo Jarmalka. Laakiin xaalada dhaqaale adag ee ka jirta inta badan Yurub ayaa keentey in ay soo gaaran waddamada waqooyiga Yurub. Laakiin habo yaraatee wax shaqo ah kama helaan waddamadan ay yimaadeen, ayey tiri Lotta Säfström oo ah agaasimaha Stadsmissionen.
Waxaa jira degmooyin ku baaqaya in ay mamnuucaan tuugsiga laakiin arintas ayey siyaasiinta reer Göteborg aheyn mid ay soo dhaweynayaan, waxeyse rabaan in dowladda ay keento dhaqaalo dadyowgan lagu caawiyo.